Impulse Control Disorders ၏ခန္ဓာဗေဒခန္ဓာဗေဒ - Your Brain On Porn
Curr Neurol Neurosci ကိုယ်စားလှယ်။ 2013 Oct;13(10):386. doi: 10.1007/s11910-013-0386-8.
စမ်းသပ်မှု CC1, ဗန် Eimeren T က.
ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစား, hypersexuality, မသင်မနေရအစားအစာနှင့်စျေးဝယ်အဖြစ် Impulsive-compulsive မမှန်, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopaminergic ကုထုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြသည်။ အနိမ့်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ, ဒီရောဂါလည်းယေဘုယျလူ ဦး ရေအတွက်ပေါ်လာပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသုတေသနပြုချက်များအရဤရောဂါဗေဒဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများ (SUD) ၏လက္ခဏာများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟူသောဝေါဟာရကိုမျှဝေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ SUDs ၌ရှိသကဲ့သို့, အပြုအမူကိုအပြုအမူအပေါ်တစ် ဦး compulsive drive ကိုနှင့်အပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်းအားဖြင့်မှတ်သားနေကြသည်။ ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါလူ ဦး ရေကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်များသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုလေ့လာသူများကဖော်ပြသည်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုအဓိကအားဖြင့် mesocorticolimbic circuit ရှိ dopaminergic system တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် dopaminergic system များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော neurobiological တွေ့ရှိချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းကို SUD သီအိုရီများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇ၊ neuroimaging နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရလဒ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အယူအဆကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသည်။
keywords: အမူအကျင့်စွဲခြင်း၊ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသောဝယ်ခြင်း၊ Hypersexuality၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုရောဂါများ၊ Mesocorticolimbic circuit၊ Reward system, Dopamine, Parkinson, Parkinson's disease, Neurobiology, Risk အချက်များ၊ Impulse control disorders, Functional ခန္ဓာဗေဒ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတွေ့ရှိချက်များအရစိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများကို neurobiological နားလည်မှုအသစ်အပေါ်နားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ neurotransmitter dopamine ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္highlightကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) ရှိလူနာ ၁၄% ခန့်သည် dopaminergic ဆေးဝါးများလက်ခံရရှိသောရောဂါများကိုလောင်းကစားခြင်း၊ hypersexuality၊ မစားမသောက်ဘဲစားခြင်း၊1•] ။ ပျံ့နှံ့မှုနည်းပါးသော်လည်း၊ ဤရောဂါများသည်အထွေထွေ (PD မဟုတ်သော) လူ ဦး ရေတွင်လည်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ ထကြွလွယ်သော - compulsive ရောင်စဉ်ရှိရောဂါများ”၊ “ Impulse control disorders” (ICDs), သို့မဟုတ်“ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု” နှင့်ရည်ညွှန်းနိုင်သည် ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုသာသတ်မှတ်ထားသော်လည်း DSM-IV-TR တွင် ICDs အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခံရသည်။2] ။ ကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းခံရသော်လည်းရောဂါလောင်းကစားခြင်း၊ hypersexuality၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းစသည့်ရောဂါများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (SUDs) နှင့်အချို့သောမရှိမဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။3] ။ အမူအကျင့်တွင် ၀ တ္ထုများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများသည်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး / အပြုအမူကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဘာ ၀ အားဖြည့်မှုများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အခြားတူညီချက်တစ်ခုမှာပစ္စည်းများကိုစားသုံးရန် (သို့) ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအဆင့်နှင့်အပြုအမူအားလုပ်ဆောင်ရန်တမ်းတခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။3] ။ ဤအလွန်အကျွံအားဖြည့်အပြုအမူများ၌အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးကဲ့သို့ dopaminergic“ ဆုချသည့်စနစ်” ပါ ၀ င်ကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေသာဓကများရှိသည်။4]) ။ ဖြစ်စဉ်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒဆိုင်ရာဤတူညီမှုများကြောင့် ICD များအား DSM-V တွင်အမူအကျင့်စွဲမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အဆိုပြုထားသော်လည်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုသာ DSM-V ၏စွဲချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအပိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။4].
ထိရောက်သောကုထုံးနှင့် ICD များအားကာကွယ်ခြင်းသည်ဤရောဂါဗေဒဆိုင်ရာအပြုအမူများမည်သို့တိုးတက်သည်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သည်။ အရေးကြီးသောအစတစ်ခုမှာဘုံ neurobiology နှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်တူညီသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲ၏ neuroanatomy နှင့်ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်စတင်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် neuroimaging နှင့် dopamine ကိုအာရုံစိုက်သည့် PD နှင့် Non-PD လူ ဦး ရေ၏အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဆက်စပ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ICDs / အမူအကျင့်စွဲ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ dopaminergic endophenotype ၏ neurobiological အခြေခံမူဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
SUDs ၏ neurobiological အခြေခံအပေါ်ကျယ်ပြန့်သုတေသနရှိခဲ့သည် (ပြန်လည်သုံးသပ်အဘို့, ကိုကြည့်ပါ ) ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာဝတ္ထုစွဲလမ်းမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောနှင့်ဆိုင်သောနျူကလီးယားစက်ဝိုင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။
Mesocorticolimbic“ Reward” စနစ်၏ Neuroanatomy
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုသည် ventral striatum ပါဝင်သော mesocorticolimbic circuit တွင်အားဖြည့်အရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (NAcc)], orbitofrontal cortex (OFC), အ anterior cingulate cortex (ACC), အ amygdala နှင့် hippocampus အပါအဝင်5] (သို့သော်ကြည့်ပါ ) ။ အသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၊ အစားအစာနှင့်လိင်ကဲ့သို့သောသဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများနှင့်သဘာဝမဟုတ်သောအားဖြည့်အားဖြည့်ဆေးများက dopamine ကို ventral tegmental fromရိယာမှ NAcc၊ amygdala နှင့် hippocampus သို့လွှတ်ပေးသည်။7] ။ ဤ dopaminergic အချက်ပြမှုသည်အဓိကအားဖြင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေပြီးတွဲဖက်သင်ယူမှုကိုအားပေးသည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် OFC ယူဆရအမှန်တကယ်ဆုလာဘ်အားဖြင့်ထုတ်ယူအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူဆုလာဘ် - ခန့်မှန်းအချက်များနှင့်ဆက်စပ်အတွက်အဓိကသော့ချက်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်8] ။ OFC သည် (ဆွေမျိုး) ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို encoding နှင့် update လုပ်ခြင်းတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။8] ။ midbrain တွင် dopaminergic neuromodulation သည် hippocampus-dependant long-term memory ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပုံရသည်။ သို့မှသာဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နောက်ခံအခြေအနေများကိုနောက်ပိုင်းအခြေအနေများတွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။7] ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ACC သည်ဆုလာဘ်များကိုလုပ်ရပ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။9] ။ ကျန်းမာသော ဦး နှောက်တစ်ခုတွင်ဆုလာဘ် - ညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူသည် prefrontal cortex (PFC) ၏တားစီးလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်သည်။ ဤနေရာတွင်မတူညီသောအာရုံခံသွင်းအားစုများ၊ အမှတ်တရများ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဇီဝကမ္မအခြေအနေများ (ဥပမာအာဟာရထောက်ပံ့မှု) ကိုလုံလောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိစေရန်ပေါင်းစည်းရမည်။10] ။ OFC နှင့် ACC မှတစ်ဆင့်အပေါ်မှအောက်သို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများသည် mesolimbic ဒေသများသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးဆုလာဘ်များရှာဖွေလိုသောလှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။9].
mesocorticolimbic circuit တွင်အပြောင်းအလဲသည်အဓိကအားဖြင့် dopaminergic transmission အပေါ်မှီခိုသော်လည်း၊ အခြား neurotransmitter system များသည်လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒါဟာဆု၏ "အကြိုက်" μ-opioid ဆွခြင်းဖြင့်ပါးနှင့် NAcc နှင့် ventral pallidum အတွက် dopaminergic စနစ်နှင့်အတူနီးကပ်စွာအပြန်အလှန်ကြောင်းယူဆနေသည်11] ။ ထို့အပြင် dopamine: D ၏ coactivation1 လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်ဆုသင်ယူမှုများအတွက် corticolimbic striatal ဆားကစ်အတွင်း receptors နှင့် NMDA စနစ်များကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်12] ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ / rostromedial tegmental နျူကလိယ၏အမြီးမှအနီးအနား ventral tegmental substantရိယာနှင့် substantia nigra မှ GABAergic စီမံကိန်းများ dopaminergic စနစ်များအတွက်အဓိကဘရိတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ပုံရသည် .
တစ် ဦး Altered စနစ် - အစွဲတိုက်နယ်
အလွဲသုံးစားမှုပစ္စည်းများကိုခိုင်မာသည့်ဒြပ်အားဖြည့်ဆေးအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာလေ့မပြုသည့်ပိုမိုပြင်းထန်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။5, 14] ။ midbrain တွင်ရှိသော dopaminergic အချက်ပြများသည်အဓိကအားဖြင့်အရည်အချင်းကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသောအရာဝတ္ထုများအပေါ်မက်လုံးတစ်ခုတန်ဖိုးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများဆီသို့အစာစားလိုသည့်အပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်သည်ဟုထင်ရသည်။5] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောဥပမာများ (ဥပမာ - အရက်တစ်ဘီယာကိုသောက်နေစဉ်) မှရရှိသောဆုလာဘ်စနစ်အားပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်းဖြင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်ဟူသောအချက်ကိုထင်ဟပ်သည်။15] ။ အေးစက်ဝေါဟာရ၏ဝေါဟာရများတွင်, အချက်များဟာခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူ) အတွက်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက် cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိပြီးရလဒ်များသည်ကွဲလွဲနေပြီး SUD လေ့လာမှုများနှင့်အမြဲတမ်းနှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။16-19] ။ ဤသည်မတူကွဲပြားသောနည်းလမ်းများနှင့်အချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။20] ။ ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုအပြင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတွင်အခြေအနေအားလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုသည်ခြွင်းချက်မရှိသောလှုံ့ဆော်မှုအတွက်“ လိုချင်ခြင်း” သို့မဟုတ်“ တဏှာ” နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။5, 18, 21] ။ ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်သည်တိုတိုနှင့်ဆိုင်သော ဦး နှောက်ofရိယာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် mesolimbic dopaminergic စနစ်၏ overactivation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။9] (ပုံကိုကြည့်ပါ။ 1) ။ ဤအကြံပြုချက်နှင့်အညီ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့် / သို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများနှင့်ပါတ်သက်သောအကြောင်းအရာများသည် "Impulse Control Disorder" (ICD) ၏အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်နှင့်အမျှယေဘုယျအားဖြင့် Impulse Control ကိုလျော့နည်းစေသည်။22-24] ။ သွေးဆောင်ခံရသောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်သို့မဟုတ်အပြုအမူတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများထက်ပိုသည်။ စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းကန ဦး မတရားပြုမူသောအပြုအမူသည်နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုလေ့လာသည်။ SUD နှင့်သက်ဆိုင်သောသီအိုရီများအရအလေ့အထများဖြစ်ပေါ်နေစဉ်တွင်အခြေအနေကိုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလှုံ့ဆော်မှုသည် NAcc ၏ခွံမှ၎င်း၏အမာခံသို့နောက်ဆုံးတွင် striatum နှင့်ဆက်စပ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့် sensorimotor corticostriatal ဆားကစ်များသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုဆိုသည်။7] ။ ထို့အပြင် ICD များတွင်ထိုကဲ့သို့သောအကူးအပြောင်းကိုအကြံပြုသောတွေ့ရှိချက်များရှိခဲ့သည်။25].
ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) တွင်လောင်းကစားခြင်းဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်အတူ striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှုပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း (a)  နှင့် dopamine ပြီးနောက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတွင် orbitofrontal cortex (OFC) နှင့် rostral cingulate zone (RCZ) တို့၏လှုပ်ရှားမှုအားလျော့နည်းစေသည် ...
မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း SUDs ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဓိကသီအိုရီများကိုဖော်ပြထားသည်။26] ။ The ချို့တဲ့ယူဆချက်ဆုချ အချို့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတစ်ခု D ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြကြောင်းဖော်ပြသည်2 အဆိုပါ limbic စနစ်အတွက်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ  ။ ထို့ကြောင့်အားနည်းချက်ရှိသူများသည် Dopamine အဆင့်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်နှင့်အနားယူရန်အတွက်မသက်မသာဖြစ်ပြီးအားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည်။27] ။ ရော်ဘင်ဆင်နှင့်ဘာဂျစ်  သို့သော်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အဓိကကျသောအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၏အခန်းကဏ္stressကိုအလေးပေးဖော်ပြပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သော dopamine surges သည်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲစဉ်ကာလအတွင်းဆုလာဘ်စနစ်ကိုအသိသာပြုသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါရလဒ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသက်ရောက်မှုတစ်ခု hypersensitivity ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားအများကြီးရှိသော်လည်း sensitization သီအိုရီအချို့သည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုအားနည်းချက်များရှိကြောင်းရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါ။ Goldstein နှင့် Volkow  အားနည်းသောတုန့်ပြန်မှုတားစီးခြင်းနှင့်စွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာအဓိကကျသည့်အရည်အသွေး (I-RISA) စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Blum et al လိုပဲ။  သူတို့က D ကို hypothesize2 receptor ချို့တဲ့မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများအတွက်ကန ဦး တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။28].
ဤအပိုင်းတွင်ဆုများအပြောင်းအလဲနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဆောက်အအုံများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်များအားသိထားသင့်သည့်ရုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အောက်ပါကဏ္များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ neurobiological တွေ့ရှိချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးသီအိုရီများနှင့်ဆက်စပ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
လူတိုင်းသည်ဆုချသည့်စနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သော်လည်းလူတိုင်းကမူဆုတစ်ခုတည်းကိုပင်တူညီစွာမတုံ့ပြန်ကြပါ။ လူအများစုကရံဖန်ရံခါအခါအားလျော်စွာလောင်းကစားလုပ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မကြာခဏအစာစားခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်မည်သူစွဲလမ်းလာမည်နည်း။ အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏ဖြစ်ပေါ်လာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလွှမ်းမိုးရန်စဉ်းစားသောအချက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုပုံတွင်ပြထားသည်။ 2.
အပြုအမူစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဆက်စပ်အချက်များ။ AHDH အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု - hyperactivity ရောဂါ, OCD obsessive-compulsive မမှန်, Sud ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်
SUDs များတွင်အမွေဆက်ခံနိုင်မှု၏ခန့်မှန်းချက် 40 ကနေ 70% အထိအထိ  ။ အမူအကျင့်စွဲမှုနယ်ပယ်တွင်သုတေသနပြုမှုသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကြီးမားသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏ ၃၇ မှ ၅၅% အထိရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။30] ။ အခြားလေ့လာမှုနှစ်ခုရှိသော်လည်းအနိမ့်ဆုံးတွေ့ရှိရသည်။31] သို့မဟုတ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား  မျိုးရိုးလိုက်မှုနှုန်း။ polymorphic ၏မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် ICD များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အဘယ်ကြောင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာမျိုးဗီဇ၏ဖော်ပြမှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်သက်တမ်း (epigenetics) အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်သည်။29] ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်များအရအချို့သောပိုလီမာဖီကိန်းများသည်စရိုက်လက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် neurotransmitter များရရှိမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း၊ တတိယအနေဖြင့် polymorphic သည်အခြားသော polymorphic များနှင့်အပြန်အလှန်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
PD နှင့် Non-PD လူ ဦး ရေရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများနှင့် ICD များအကြားဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများတွင်မျိုးရိုးဗီဇကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသောမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။33, 34] ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်လေ့လာမှုများက dopaminergic ဂီယာကိုလွှမ်းမိုးသော polymorphic များဥပမာအားဖြင့် dopamine Transporter polymorphic SLCA3 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor polymorphic Taq1A ။ သို့သော် catecholaminergic, serotonergic, glutamatergic နှင့် opioid စနစ်များကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများသည်လည်း ICD နှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်စပ်စရိုက်များအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, neurotransmitter ၏ရရှိမှုနှင့်လည်ပတ်မှုမျိုးဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ရရှိလာတဲ့ endophenotypes အချို့သည်အခြားအရာများထက် (အပြုအမူဆိုင်ရာ) စွဲစွဲလမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ရန်ပိုမိုကျရောက်လေ့ရှိသည်။ dopamine အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ, ဒီအပိုင်းအမူအကျင့်စွဲအတွက်ပြောင်းလဲအခြေခံ neurotransmitter function ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်။
အလားအလာရှိ longitudinal လေ့လာမှုများ၏မရှိခြင်းရှိနေသောကြောင့် neurobiological မူကွဲသည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လိုက်နာမှုရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, တွေ့ရှိချက် preexistent, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျိုးရိုးဗီဇစိတ်ပိုင်းဖြတ်, dopaminergic မူမမှန်, အလှည့်အတွက် dopaminergic စနစ်အတွက်ထပ်မံမညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေကို ဦး တည်ကြောင်းညွှန်ပြ။ D ကိုအာရုံစိုက်လေ့လာမှုများ2 အဲဒီ receptor gene တွေက Taq1A polymorphism ရဲ့ A1 allele ဟာ D ကိုရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုအကြံပြုသည်2 အဆိုပါ striatum အတွက် receptors  ။ ထို့အပြင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်ရောဂါဗေဒအလွန်အကံျွသောက်သုံးသူများသို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိချက်များရှိသည်။11ကို C] striatum အတွက် raclopride အခြေခံစည်းနှောင်အလားအလာ [35-37] ။ သို့သော် PET ရလဒ်များသည် dopamine transporters သို့မဟုတ် receptors ၏အလုပ်လုပ်သော downregulation သို့မဟုတ်အခြားပိုမိုမြင့်မားသော synaptic dopamine level ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကြောင့် sensitization အယူအဆအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်တစ် ဦး Basal hypodopaminergic ပြည်နယ်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ယူဆချက်သို့မဟုတ်အစား hyperdopaminergic ပြည်နယ်ကအဆိုပြုထားအဖြစ်ရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဆဲ  ။ ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်မတူဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်အခြားလေ့လာမှုများ [38, 39••] နှင့် ICDs ရှိ PD လူနာများနှင့်လေ့လာမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားသောအခြေခံစည်းနှောင်ကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ40••] ။
တ ဦး တည်းကအခြား neurotransmitter လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစွဲအတွက်ပြောင်းလဲနေကြသည်ယူဆနိုင်ပါတယ်ပေမယ့် , သက်သေအထောက်အထားများမကြာခဏ SUDs အတွက် preclinical သို့မဟုတ်ဆေးဝါးလေ့လာမှုများကန့်သတ်ထားသည်။
Opioid antagonist ကုထုံးသည် ICDs များစွာတွင်ထိရောက်သောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၄ င်းသည် midbrain μ-opioid receptor stimulation ကို အခြေခံ၍ GABA နှင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။41-44] ။ serotonin နှင့် ICDs များနှင့် ပတ်သက်၍ serotoninergic ဆေးဖြင့်ကုသမှုလေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရလဒ်များရောထွေးသည်။24] ။ သို့သော် Cools et al ။  dopamine သည်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်သော်လည်း serotonin သည်ပြစ်ဒဏ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အခါလုပ်ဆောင်မှုများကိုတားဆီးပေးသည်။ SUDs အပေါ် Preclinical လေ့လာမှုများ PFC ကနေ NAcc သို့ပြောင်းလဲ glutamatergic ဂီယာပြောင်းလဲမူးယစ်ဆေး - ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အပြုအမူ၏ compulsive အာရုံစူးစိုက်မှုကြောင်းဖော်ပြသည်46] ။ GclAgic ဆေးနှင့် GABAergic ဆေးသည်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုထိရောက်စွာကုသကြောင်းဆေးမတိုင်မီစစ်ဆေးမှုများနှင့်ဆေးလေ့လာမှုများမှသက်သေသာဓကများရှိသည်။47-50].
လက်ရှိတွင် neurotransmitter များ၏အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုအတွက်ထည့် ၀ င်မှုသည် dopamine အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်အပြောင်းအလဲကိုဆုချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာအပြုအမူများ၏ neuroimaging တွေ့ရှိချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ dopamine သည်အဓိကအားဖြင့်များစွာသောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်မှုရှိသည်ဟုယူဆရပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဆုပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သော dopaminergic အခြေခံကိုအာရုံစိုက်မည်။
dopamine လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထူးခြားသောဆုလာဘ် sensitivity သည်စွဲလမ်းမှုသီအိုရီများ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်နားလည်မှုအားနည်းဆဲဖြစ်သည်။51] ။ ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုပုံစံများများစွာရှိသောကြောင့်ရလဒ်များကိုအနှစ်ချုပ်ရန်မှာခက်ခဲသည်။ အများအားဖြင့်ရိုးရှင်းသောဆုလာဘ်ခံစားမှုနှင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးတို့အကြားသင့်လျော်သောခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း
ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းမရှိသောဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းမှုများသည် striatal dopaminergic signal ကိုတိုးပွားစေသော်လည်းမျှော်လင့်ထားသော်လည်းရရှိခြင်းမရှိသေးသောဆုလာဘ် (အနှုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းချက်အမှားဟုလည်းခေါ်သည်) သို့မဟုတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသောဆုံးရှုံးမှုသည် striatal striatal dopamine receptor stimulation ကိုလျော့နည်းစေသည်။51, 52] ။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ဆုလာဘ် sensitivity သည် activation ဖြစ်သည့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်၎င်း၏အမှားများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာခန့်မှန်းရခက်သည့်ဆုများမရရှိခြင်း၊
လေ့လာမှုနှစ်ခုအတွက်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်နှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်များအဓိကအား ventromedial PFC အတွက် ICDs နှင့်အတူလူနာအတွက် activation လျော့နည်းထုတ်ယူပုံ53, 54•] ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းမရှိသောဆုလာဘ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရပါ ၀ င်သူများအားလုံးသည်အပြစ်ပေးခြင်းထက်ဆုချခြင်းအားတုံ့ပြန်မှုတွင်ပိုမိုကြီးမားသော VS လှုပ်ရှားမှုကိုပြသခဲ့သည်။25] ။ သို့သော်ဆုချီးမြှင့်မှု sensitivity ၌ဤခြားနားချက်သည်ဆုလာဘ်များသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးအားတူညီသောတုံ့ပြန်မှုကြောင့်လားဆိုတာမသေချာပါဘူး။ မှတ်သားစရာမှာ dopamine agonists သည် PD လူနာများအတွက်မျှော်လင့်မထားသောဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်အဓိကအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးခံစားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။55] ။ အင်တာနက်စွဲသူများသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆခြင်းမရှိသောရလဒ်များဖြင့် OFC ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။56].
အပြုအမူအားဖြင့်ပြောင်းလဲထားသောဆုလာဘ် sensitivity သည်ပြုပြင်ထားသောအားဖြည့်သင်ကြားရေးကို ဦး တည်သည်။ လေ့လာမှုများစွာအရလောင်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါရှိသူများသည်ဆုလာဘ်နှင့်အပြစ်ပေးခြင်းသင်ယူမှုအားနည်းသည်ဟုပြသကြသည်။57-59] ။ သွယ်ဝိုက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသင်ယူခြင်းဖြင့်ကဒ်ဂိမ်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်သည် dorsolateral PFC၊ insula, posterior cingulate cortex, OFC, ventromedial PFC, VS နှင့် ACC / ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်မော်တာinvolvingရိယာပါဝင်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ အမူအကျင့်စွဲခြင်း၌အားဖြည့်ခြင်းသင်ကြားမှုကိုအကဲဖြတ်သည့် neuroimaging လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက် PET လေ့လာမှုတစ်ခုက VS တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူစွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းမှုရှိသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်အတူတွေ့ရသည်။60] ။ ပါဝါ et al ။  ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများပိုမိုများပြားလာခြင်းကိုညွှန်ပြနိုင်သည့်အန္တရာယ်မြင့်မားသောစမ်းသပ်မှုများအတွင်းလောင်းကစားဝိုင်းသည်မှန်ကန်သော caudate၊ OFC နှင့် amygdala / hippocampus တို့တွင်တက်ကြွစွာတက်ကြွမှုကိုပြသခဲ့သည်။
အချို့သောရလဒ်များအရအမူအကျင့်စွဲလမ်းသူများသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောဆုလာဘ်များအပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ရလဒ်များသည်ဆုံးရှုံးမှုများကိုထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချရန်အဆိုပြုထားသည်။ စွဲသီအိုရီများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်လွယ်သော mesolimbic dopaminergic system ကိုခန့်မှန်းသောကြောင့် sensitization သီအိုရီနှင့်ညီသည်။ ခန့်မှန်းသောဆုလာဘ်များကိုတိတ်တဆိတ်တုံ့ပြန်ခြင်းသည်ဆုချို့တဲ့မှုယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ဆုံးရှုံးမှုမှ sensitivity ကိုလျှော့ချသို့သော်အလိုမရှိ။
SUDs ရှိ sensitization သီအိုရီနှင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီ [5, 15], အမူအကျင့်စွဲ၏အတော်ကြာလေ့လာမှုများတဏှာသို့မဟုတ်လိုသောခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်တွေကိုမှတိုးမြှင့် mesocorticolimbic တုံ့ပြန်မှုပြသပါ။ ICDs ရှိသူ PD လူနာများအနေဖြင့် ICDs မရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက O'Sullivan et al ။ [40••] ကြားနေအချက်များနှင့်မတူဘဲဆက်စပ်ပစ္စည်းများအောက်ပါပိုမိုကြီးကျ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ dopaminergic ဆေးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းမပြုသော Hypersexual PD လူနာများသည် ICD မရှိဘဲ PD လူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် limbic cortex၊ paralimbic cortex, temporal cortex, occipital cortex, somatosensory cortex နှင့် PFC တို့မှအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုတုန့်ပြန်မှုပိုမိုမြင့်တက်လာကြောင်းပြသသည်။62] ။ ACC တွင်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ posterior cingulate cortex၊ OFC နှင့် VS တို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
အခြားလေ့လာမှုများအရ dorsal striatal ဒေသများတွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာခြင်းသို့မဟုတ်အရိပ်အမြွက်များကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် frontal၊ occipital နှင့် parahippocampal cortices များတွင်တက်ကြွမှုများပြားလာသည်။63-66] ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်လောင်းကစားမြင်ကွင်းများ၏ဗွီဒီယိုများကို အသုံးပြု၍ အလုပ်လုပ်သော MRI လေ့လာမှုတစ်ခုသည် PFC နှင့် OFC၊ caudate / basal ganglia၊18].
PD မဟုတ်သည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်အရက်အလွန်အကျွံစားသည့်ရောဂါရှိသူများနှင့်အတူ MRI ၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ MRI လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်မျှော်လင့်နေချိန်တွင် VS တွင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်များကိုပေးခဲ့သည်။54•, 67] ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤလေ့လာမှုများသည်ဆုလာဘ်များ (ဥပမာအားဖြင့်ငွေကြေးမက်လုံးပေးမှုနှောင့်နှေးခြင်း) ကိုတိုက်ရိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ပုံစံများဖြင့်ဒီဇိုင်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ရလဒ်များမှာသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသော်လည်းများစွာသောလေ့လာမှုများက SUDs နှင့်အတူ striatum နှင့် / သို့မဟုတ် PFC များတွင် cue ဓါတ်ပြုမှုတိုးလာသည်။
SUDs များအနေဖြင့် ICDs ရှိလူနာများအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော၊ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသောဆုလာဘ်အတွက်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းနှင့်ပိုမိုနည်းပါးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူခြင်း၊68-73] နှင့်နှောင့်နှေးလျှော့လျှော့, ဥပမာ, နှောင့်နှေးပိုကြီးတဲ့ကျော်ချက်ချင်းသေးငယ်ဆုလာဘ်ရွေးချယ်ခြင်း [71, 74-77] ။ သို့သော် ICDs ရှိ PD လူနာများသည်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။78] ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးသည်ထူးချွန်သောဆုလာဘ်ခံစားမှုနှင့်ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည် (အပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း)79] ။ ထို့ကွောင့်စွဲခြင်း၌တွေ့ရသည့်အတိုင်းနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ခြင်းများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်လာပါကတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း (ventromedial PFC, OFC နှင့် VS) နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု (နှစ် ဦး နှစ်ဖက် PFC နှင့် ACC) တို့ပါဝင်သော ဦး နှောက်areasရိယာများပျက်ပြားသွားနိုင်သည်။79] ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ VS နှင့် OFC တို့တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆုလာဘ်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လောင်းကစားသမားများ၏ပုဂ္ဂလဒိvalue္တန်ဖိုးနှင့်လျော့နည်းဆက်နွယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။71] ။ တစ်ပြိုင်တည်းတည်း dopamine agonists ကိုလက်ခံရရှိသည့် ICD များရှိ PD လူနာများသည်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် VS activation နည်းသည်။70] ။ နှောင့်နှေးလျှော့အတွက်သို့သော် VS နှင့် OFC အတွက် activation ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလောင်းကစားသမားများတွင်ပုဂ္ဂလဒိvalue္တန်ဖိုးနှင့်ပိုမိုအားကောင်းဆက်နွယ်နေကြောင်း .
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်နှောင့်နှေးမှုလျှော့စျေးကို ICDs တွင်ပြောင်းလဲထားသည်ဟူသောသက်သေအထောက်အထားရှိသည်။ ထို့အပြင် neuroimaging လေ့လာမှုများသည်လျှော့စျေးတွင် ICC ရှိ OFC နှင့် VS များတွင်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲသွားသည်။
Impulse / Disinhibition and Perseveration
PFC-mediated အပေါ်မှအောက်ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းပြောသောအခါ impulsivity နှင့် disinhibition ကိုထပ်တူထပ်မံအသုံးပြုသည်။80] ။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ, ချို့ယွင်းတားစီးမှုကို SUD အများစုတွင်တွေ့ရပြီး hypoactive dorsal ACC နှင့် dorsolateral PFC တို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။9, 81] ။ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားသမားများနှင့်အိုင်ဒီဒီဒ်ရှိ PD လူနာများသည်လည်း Stop-signal လုပ်ငန်း၊ go / no-go ပါရာဒိုင်းနှင့်တားစီးထိန်းချုပ်မှုပါဝင်သော Stroop လုပ်ငန်းစသည့်လုပ်ငန်းများတွင်ချို့ယွင်းမှုများရှိသည်။58, 81-84] ။ သို့သော်လောင်းကစားသမားများသို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားမည်သည့်အမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမှမတွေ့ရှိသောလေ့လာမှုများလည်းရှိသည်။85-88] သို့မဟုတ် ICDs နှင့် PD ထိန်းချုပ်မှုရှိသော PD လူနာများ  ။ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေက ventromedial or dorsomedial PFC မှာလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်။85, 90] (သို့သော်ကြည့်ပါ88]) ။ dopamine ၏အခန်းကဏ္ကိုအလေးအနက်ထားလေ့လာမှုတစ်ခုအရဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူကဒ်ဂိမ်းတစ်ခုအတွင်း dopaminergic ဆေးသည် PD လူနာများအတွက်စိတ်ရောဂါကုသမှုတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်နယ်မြေများအားပိတ်ဆို့စေခဲ့သည်။91•] ။ ဤသည် dopaminergic ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ICD လူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေခံ dopamine အဆင့်များပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီ (ပုံ။ 3) .
striatal DA အဆင့်၏ပုံစံနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် appetitive နှင့်တားစီးဒေသများ၏နောက်ဆက်တွဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ညာဘက် panel ကို, အစက်မျဉ်း အဆိုပါ ventral tegmental fromရိယာကနေပုံမှန်လုပ်သူများနှင့် phasic DA လွှတ်ပေးရန် (VTA) နျူကလိယ accumbens ရန် (Nacc). လက်ဝဲ panel ကို ...
မကြာခဏပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာတုန့်ပြန်မှုပြုခြင်းဖြစ်သည်။84, 93, 94] ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လုံလောက်မှုရှိသော်လည်းအပြုအမူကိုပြောင်းလဲရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်း။ ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များတွင်ပြောင်းပြန်သင်ယူခြင်း (ဥပမာ - အပြုအမူအားလုံလောက်စွာလိုက်လျောညီထွေစွာပြုပြင်ခြင်း) သည် ventrolateral PFC ကိုခေါ်ယူသည်။ လိုက်ဖက်ညီစွာလေ့လာမှုတစ်ခုကရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်ပြောင်းပြန်သင်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွင်တုန့်ပြန်အားထုတ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောငွေများကိုအနိုင်ရခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့တွင်မှန်ကန်သော ventrolateral PFC ၏တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။95].
ပိုးသတ်ဆေးနှင့်အတူ, ဇွဲ, dopaminergic နှင့် serotoninergic function ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်ဆက်စပ်ခဲ့သည်45] ။ သို့သော်ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအတွက်ဇွဲမကြာခဏစွန့်စားမှုယူပြီးသို့မဟုတ်ပိုးသတ်ဆေးတိုင်းတာသောအလုပ်များကိုနှင့်အတူအကဲဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤချို့ယွင်းမှုများကိုရောထွေးနိုင်ခြင်းရှိ / မရှိမသိရသေးပါ။
စရိုက်များ, Comorbidities နှင့်ဘဝဖြစ်ရပ်များ
PD နှင့် PD မဟုတ်သူများအတွက်ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစရိုက်များတွင်စရိုက်လက္ခဏာမဆန်သောစိတ်၊3, 78] ။ impulsivity နှင့်အသစ်အဆန်းရှာဖွေ dopaminergic နှင့် serotonergic ထုတ်လွှင့်စနစ်များနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသောကြောင့်ဤစရိုက်များ, အထက်ဖော်ပြပါဖြစ်ရပ်များနှင့်မသက်ဆိုင်96-98].
စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကြွစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာစေသည့်ရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်မှုများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုများ - hyperactivity Disorder သည်များသောအားဖြင့် PD နှင့် PD လူ ဦး ရေများတွင်အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်အတူတကွတွေ့မြင်နိုင်သည်။3, 78] ။ PD လူနာများရှိ ICDs များသည် PD မဟုတ်သောလူ ဦး ရေများကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။99-101] - alexithymia (လူတစ် ဦး ၏ခံစားချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် (KS Goerlich, CC Probst, LM Winter, K. Witt, G. Deuschl, B. Möller, T. van Eimeren, 2013, အတည်မပြုရသေးသောအချက်အလက်) ။
ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်ဆောင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အရေးပါဘဝဖြစ်ရပ်များအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များအမူအကျင့်စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်လျစ်လျူရှုခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သန္ဓေသား testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်မှုပမာဏသည် striatum တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှု၊102] ။ အစောပိုင်းကလေးဘဝတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများသောဘဝဖြစ်ရပ်များသည် impulsivity ကိုခန့်မှန်းရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။29] ။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ချိန်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ dopaminergic ဂီယာကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်၊29].
ကျနော်တို့တွေ့ရှိချက်များကိုအနှစ်ချုပ်မီ, ငါတို့အချို့ယေဘုယျန့်အသတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ပထမအချက်မှာစျေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများရှိသည့်လူနာများနှင့်အတူ neuroimaging လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသဖြင့်သက်သေသာဓကမှာရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းတို့အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့အပွငျအပြုအမူစွဲ၏ longitudinal လေ့လာမှုများများစွာသောမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်များသည်အစပျိုးခြင်း (သို့) အကျိုးဆက်များဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
အချုပ်အားဖြင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် SUDs ရှိ neurobiology နှင့်ဆင်တူသည်ကိုပြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက် striatum အတွက် binding နိမ့် dopamine အဲဒီ receptor ဖော်ပြသည်35-37] တစ် ဦး လျှော့ receptor သိပ်သည်းဆတစ်ခုသို့မဟုတ်မြင့်မားသော dopamine အဆင့်ကိုဖြစ်စေရောင်ပြန်ဟပ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောဆုလာဘ်များကိုတိတ်တဆိတ်တုံ့ပြန်မှုသည်“ ပုံမှန်” ဆုများအပေါ်မခံစားနိုင်မှုလျော့နည်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြေခံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။53, 54•] ။ စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအောက်ပါ mesocorticolimbic စနစ်၏ပိုမိုမြင့်မား activation [40••, 56, 62-66] dopaminergic hypersensitivity ကိုပြောတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်သင်ယူမှုနှေးကွေးမှုနှုန်းနှေးကွေးခြင်း။55, 56, 103] အပြစ်ပေးနေစဉ်များသောအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်တတ်သည့် dopamine ပမာဏသည်ကျဆင်းခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသည့်ဘာသာရပ်များသည် ventrolateral နှင့် dorsolateral PFC တွင်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောတားစီးနှိမ်နှင်းခြင်း၊58, 81-85, 90] ။ မြင့်မားသောဆုလာဘ် sensitivity အပြင်ချို့ယွင်းသောအပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုသည်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုယူခြင်းနှင့်လျှော့စျေးလျှော့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။68-77].
ယေဘူယျအားဖြင့်ရလဒ်များသည် I-RISA မော်ဒယ်လ် SUDs မှအဆိုပြုထားသောအတိုင်းအတာသည်အဓိကအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလတ်ဆတ်သောအရည်အချင်းကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းခြင်းတားစီးခြင်းကိုဖော်ပြသည်။28] ။ လူအချို့က ICDs ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်အချို့မှာမဖွင့်သေးသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ရေပန်းစားသောသက်သေသာဓကများအရ dopaminergic သည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် endophenotype (ပုံကိုကြည့်ပါ) ။ 3): အဆိုပါ striatum နှင့် PFC အတွက် phasic နှင့်လုပ်သူများ dopamine လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏မော်ဒယ်များစဉ်းစား [92, 104], တစ် ဦး ချင်းစီ predisposition အဆိုပါ striatum အတွက်မြင့် tonic dopamine အဆင့်ဆင့်ဆိုလိုကြောင်းယူဆချက်နိုင်33] ။ Tonic dopamine အများစု: D ကိုသက်ဝင်2 phasic dopamine: D ကိုလှုံ့ဆော်သော်လည်း receptors, receptors1 receptors  ။ တိုးမြှင့် tonic: D ကတည်းကတိုးမြှင့် tonic dopamine အဆင့်ဆင့်, အမူအကျင့်စွဲအတွက် prefrontal လိုငွေပြမှုကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်2 ဆွ PFC သွင်းအားစုကို attenuate မှပြခဲ့ပြီးလျှော့ချ PFC လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် [5, 104] ။ သို့သော်ပြစ်ဒဏ်သည် dopamine ဆေးများကိုလုံလောက်စွာလျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အားကြီးသောအားဖြည့်ဆေးများကိုသောက်သုံးပြီးနောက် Suprathreshold phasic ပေါက်ကွဲမှုများသည်အလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ dopamine agonists သည်အဓိကအားဖြင့် tonic dopamine အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် PD လူ ဦး ရေတွင်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည် tonic dopamine level ၏အရေးပါမှုကိုထောက်ခံသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီမော်ဒယ်တစ် ဦး စုစုပေါင်းရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်, dopaminergic ဂီယာနှင့်ပတ်သက်။ မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူကအခြား neurotransmitter ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုမထီမဲ့မြင်မပြုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင် dopaminergic ၏ - အန္တရာယ် endophenotype ၏ဤပုံစံသည်ပင်ကိုယ်မူလ neurobiological သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးအနာဂတ်ကုသမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအသိပေးလိမ့်မည်။
Opioid စနစ်များသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည် hedonic အတွေ့အကြုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ dopaminergic system များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစွဲလမ်းမှုကို ဦး တည်စေသည့် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည်။ ဤအချက်နှင့်အညီ, စွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurotransmitter စနစ်များ၏ရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect ဖြစ်သင့်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အကျိုးဆက်များမှထွက်ပေါ်လာသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန် longitudinal ကောင်းသောလေ့လာမှုများကိုလိုအပ်သည်။ ဤတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များ (ဥပမာ၊ IMAGEN, http://www.imagen-europe.com) အရေးကြီးတဲ့အဖြေတွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
Thilo van Eimeren သည် Leibniz အသင်းမှထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
Catharina C. Probst ကသူမမှာအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခမရှိဘူးလို့ကြေငြာခဲ့တယ်။
Thilo van Eimeren သည် CHDI ဖောင်ဒေးရှင်း၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ ဂျာမန်အစိုးရမှအလုပ်ခန့်ထားသူဖြစ်ပြီးသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများစွာ၏ခရီးသွားလာရေးနှင့်နေရာထိုင်ခင်းအသုံးစရိတ်များကိုရရှိခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ငွေကောက်ခံ on ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Neuroimaging
Catharina C. Probst, ဖုန်းနံပါတ်: + 49-431-5975504 + 49-431-5975504, ဖက်စ်: + 49-431-5975855, အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Thilo van Eimeren, ဖုန်း: + 49-431-5978807 + 49-431-5978807, ဖက်စ်: + 49-431-5975809, အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
၁။ Weintraub D၊ Koester J, Potenza MN, Siderowf အေဒီ, Stacy M, Voon V, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders: လူနာ ၃၀၉၀ ကို Cross-sectional study လုပ်တယ်။ Arch Neurol ။ 1; 3090: 2010-67 ။ Doi: 589 / archneurol.95 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၏ 2. ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်: စတုတ္ထထုတ်ဝေစာသားတည်းဖြတ်မူ DSM-IV-TR ။ ဝါရှင်တန် - အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ 2002 ။
၃။ Grant JE, Potenza MN, Weinstein A, Gorelick DA ။ အမူအကျင့်စွဲနိဒါန်း။ Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ 3; 2010: 36-233 ။ Doi: 41 / 10.3109 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အဆိုပြုထားသော DSM-V တွင် Holden C. အပြုအမူစွဲလမ်းမှုသည်ပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံ 4; 2010: 327 ။ Doi: 935 / science.10.1126 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၅။ Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Tomasi Add စွဲစွဲလမ်းလမ်းသည်လူ့ ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 5; 2012: 52-321 ။ Doi: 36 / annurev-pharmtox-10.1146-010611 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
6. Ikemoto အက်စ် ဦး နှောက်သည် mesolimbic dopamine စနစ်အပြင်နဗ်ကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒသီအိုရီထက် ကျော်လွန်၍ အကျိုးရှိသော circuit ကိုဆုချသည်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2010; 35: 129-50 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2010.02.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
7. Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အားဖြည့်ပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များ - လုပ်ရပ်များမှအလေ့အထများ၊ နတ်နေရော့စီ။ 2005; 8: 1481-9 ။ Doi: 10.1038 / nn1579 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
8. Dolan RJ ။ လူ့ amygdala နှင့်အမူအကျင့်စည်းမျဉ်းများတွင် orbital prefrontal cortex ။ Philos Trans R ကို Soc B Biol သိပ္ပံပညာ။ 2007; 362: 787-99 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2007.2088 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
9. Goldstein RZ, Volkow ND ။ စွဲအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2011; 12: 652-69 ။ Doi: 10.1038 / nrn3119 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10. Miller က Ek, Cohen ကို JD ။ prefrontal cortex function ကိုတစ်ခု Integrated သီအိုရီ။ Annu ဗြာ Neurosci ။ 2001; 24: 167-202 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.24.1.167 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
11. Smith က KS, Berridge KC ။ ဆုလာဘ်များအတွက် Opioid limbic circuit: နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral pallidum ၏ hedonic ဟော့စပေါ့အကြားအပြန်အလှန်။ J ကို Neurosci ။ 2007; 27: 1594-605 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4205-06.2007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
12 ။ ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3306-11 ။ [PubMed]
13. Barrot M, Sesack SR, Georges F, Pistis M, Hong S, Jhou TC ။ dopamine စနစ်များကိုဘရိတ်ချခြင်း - mesolimbic နှင့် nigrostriatal လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် GABA မာစတာဖွဲ့စည်းပုံအသစ်။ J ကို Neurosci ။ 2012; 32: 14094-101 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3370-12.2012 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
14. Chiara GD ။ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲအတွက် mesolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္motivကိုတစ် ဦး ကစိတ်ခွန်အားနိုးလေ့လာသင်ယူမှုအယူအဆ။ J ကို Psychopharmacol ။ 1998; 12: 54-67 ။ Doi: 10.1177 / 026988119801200108 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
15. ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲ၏မက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိကိစ္စများ။ Philos Trans R ကို Soc B Biol သိပ္ပံပညာ။ 2008; 363: 3137-46 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0093 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
16. Ko CH, Liu GC, Hsiao S, Yen JY, Yang MJ, Lin WC, et al ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု၏ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2009; 43: 739-47 ။ Doi: 10.1016 / j.jpsychires.2008.09.012 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၁၇။ Van Holst RJ, van den Brink W, Veltman DJ, Goudriaan AE ။ အဘယ်ကြောင့်လောင်းကစားသမားအနိုင်ရရန်ပျက်ကွက်: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သိမြင်မှုနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 17; 2010: 34-87 ။ Doi: 107 / j.neubiorev.10.1016 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18. Potenza MN, Steinberg MA, Skudlarski P, Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK, et al ။ လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်တိုက်တွန်း: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 60: 828-36 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.60.8.828 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19. Gearhardt AN, Yokum S, Orr PT, Stice E, Corbin WR, Brownell KD ။ အစားအစာစွဲ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 68: 808-16 ။ Doi: 10.1001 / archgenpsychiatry.2011.32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
cue တွင် 20. Leyton M, Vezina P. : စွဲလမ်းအတွက် striatal အတက်အကျ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 72: e21-2 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.04.036 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
21. Pelchat ML, Johnson A, Chan R, Valdez J, Ragland JD ။ အလိုဆန္ဒ၏ပုံများ: fMRI အတွင်းစားနပ်ရိက္ခာတပ်မက်ခြင်း။ Neuroimage ။ 2004; 23: 1486-93 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2004.08.023 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
22. Potenza MN ။ လောင်းကစားအပြုအမူ၏ Neurobiology ။ Curr ထင်မြင်ချက် Neurobiol ။ 2013; 23: 660-7 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2013.03.004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23. Bechara A. ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှု - neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ်နေရာသစ်။ 2005; 8: 1458-63 ။ Doi: 10.1038 / nn1584 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
24. Brewer JA, Potenza MN ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါများ၏မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008; 75: 63-75 ။ Doi: 10.1016 / j.bcp.2007.06.043 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၂၅။ Reuter J၊ Raedler T, Rose M, Hand I, Gläscher J, Büchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအားလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 25; 2005: 8-147 ။ Doi: 8 / nn10.1038 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
26. Limbrick-Oldfield EH, van Holst RJ, Clark L. Fronto-striatal dysregulation, မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း - တသမတ်တည်းရှေ့နောက်မညီမှု။ Neuroimage Clin ။ 2013; 2: 385-93 ။ Doi: 10.1016 / j.nicl.2013.02.005 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
27. Blum K, Gull JG, Braverman ER, DE လာ။ ဆုချို့တဲ့ syndrome ရောဂါ။ Am Sci ။ 1996; 84: 132-45 ။
28 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-52 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.159.10.1642 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၂၉ ။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင် interaction က၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Curr စိတ်ရောဂါကုသမှု 29 ခုနှစ်; 2012: 14-150 ။ ။ Doi: 8 / s10.1007-11920-011-0252 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
30. Lin SAEN, Lyons MJ, Scherrer JF, Griffith K, True WR, Goldberg J ။ လောင်းကစားအပြုအမူအပေါ်မိသားစုလွှမ်းမိုးမှု: 3359 အမွှာအားလုံးအတွက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲ။ 1998; 93: 1375-84 ။ Doi: 10.1046 / j.1360-0443.1998.93913758.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၃၁။ Winters KC, Rich T. အရွယ်ရောက်ပြီးသူလောင်းကစားအပြုအမူကိုလေ့လာခြင်း။ J ကို Gambl လုံး။ 31; 1998: 14-213 ။ Doi: 25 / A: 10.1023 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
32. Beaver KM, Hoffman T, Shields RT, Vaughn MG, DeLisi M, Wright JP ။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကွဲပြားမှုအပေါ်ကျား၊ မကွဲပြားမှု - ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားလောင်ဂျီတွဒ်လေ့လာမှုမှအမြွှာနမူနာများမှရလဒ်များ။ စွဲ။ 2010; 105: 536-42 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2009.02803.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၃၃. Cilia R၊ van Eimeren T. ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှထိန်းချုပ်သောမသန်စွမ်းမှုများ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုဆီသို့လမ်းပြမြေပုံရှာဖွေခြင်း။ ဦး နှောက် Struct Funct ။ 33; 2011: 216-289 ။ Doi: 99 / s10.1007-00429-011-0314 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
34. Cormier F, Muellner J, Corvol JC ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည့် Impulse Control Disorders ၏မျိုးရိုးဗီဇ။ J ကိုအာရုံကြော Transm ။ 2013; 120: 665-71 ။ Doi: 10.1007 / s00702-012-0934-4 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
35. Steeves TDL, Miyasaki J, Zurowski M, Lang AE, Pellecchia G, van Eimeren T, et al ။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလောင်းကစားနှင့်အတူ Parkinsonian လူနာအတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးမှုတိုးမြှင့်: တစ် [11ကို C] PET လေ့လာမှု raclopride ။ ဦး နှောက်။ 2009; 132: 1376-85 ။ Doi: 10.1093 / ဦး နှောက် / awp054 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 36. ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas NR, Wong မှန် CT, Zhu W က။ ဦး နှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ Lancet ။ 2001; 357: 354-7 ။ Doi: 10.1016 / S0140-6736 (00) 03643-6 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၃၇။ Kim SH, Baik SH, Park CS, ကင် SJ, Choi SW, ကင် SE ။ အင်တာနက်စွဲသူများနှင့် striatal dopamine D37 receptors များကိုလျော့ချပေးသည်။ နေပြည်တော်။ 2; 2011: 22-407 ။ Doi: 11 / WNR.10.1097b0e013e328346e ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 38. Clark L, Stokes PR, Wu K, Michalczuk R, Benecke A, Watson BJ striatal dopamine: D2/D3 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်စည်းနှောင် receptor စိတ်ခံစားမှု -related Impulse နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Neuroimage ။ 2012; 63: 40-6 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2012.06.067 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
39. Boileau ၁၊ ပေးသူ D၊ Chugani B၊ Lobo D, Behzadi A, Rusjan PM စသည်တို့။ The D2 /3ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းထဲမှာ dopamine အဲဒီ receptor: နှင့်အတူ positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု [11ကို C] - (+) - propyl-hexahydro-naphtho-oxazin နှင့် [11ကို C] raclopride ။ စွဲ။ 2013; 108: 953-63 ။ Doi: 10.1111 / add.12066 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
40. O'Sullivan SS, Wu K, Politis M, Lawrence AD, Evans AH, Bose SK, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောထကြွလွယ်သောအပြုအမူများတွင် cue- သွေးဆောင် striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှု။ ဦး နှောက်။ 2011 ခုနှစ်; 134: 969-78 ။ Doi: 10.1093 / ဦး နှောက် / awr003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် ၂၁။ Raymond NC၊ Grant JE၊ Kim SW၊ Colalt E. naltrexone နှင့် serotonin တို့မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကုသခြင်း။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကိုလေ့လာခြင်း။ Int Clin Psychopharmacol ။ 41; 2002: 17-201 ။ Doi:5/ 10.1097-00004850-200207000 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42. Grant JE ။ naltrexone နဲ့ကုသ compulsive ဝယ်ယူမှုသုံးဖြစ်ပွားမှု။ Int J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Clin Pract ။ 2003; 7: 223-5 ။ Doi: 10.1080 / 13651500310003219 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
43. Grant JE, Kim SW ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု။ Minn Med ။ 2006; 89: 44-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44. Bosco: D, Plastino M, Colica C, Bosco F, Arianna S, Vecchio A, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ကုသမှုအတွက် Opioid antagonist naltrexone ။ Clin Neuropharmacol ။ 2012; 35: 118-20 ။ Doi: 10.1097 / WNF.0b013e31824d529b ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
45. Cools R, Nakamura K, Daw ND ။ Serotonin နှင့် dopamine - ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 98-113 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
46. ​​Kalivas PW, Volkow N၊ စွဲလမ်းမှုအတွက် Seamans ဂျေမထိန်းချုပ်နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens glutamate transmission အတွက်ရောဂါဗေဒ။ Neuron ။ 2005; 45: 647-50 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2005.02.005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
47. Olive MF, Cleva RM, Kalivas PW, Malcolm RJ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုကုသရန်အတွက်အချိုမှုန့်ဆေးဝါးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2012; 100 ကို: 801-10 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2011.04.015 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
48. Tyacke RJ, Lingford-Hughes A, Reed LJ, Nutt DJ ။ GABABစွဲနှင့်၎င်း၏ကုသမှုအတွက် receptors ။ Adv Pharmacol ။ 2010; 58: 373-96 ။ [PubMed]
ကန ဦး မျက်စိကန်းသောအဆင့်သတ်မှတ်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းလေ့လာမှု - 49. Dannon PN, Rosenberg O, Schoenfeld N, Kotler M. Acamprosate နှင့် baclofen တို့သည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ ရှေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၁၁; ၂း၃၃ ။ Doi: 2011 / fpsyt.2 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
50. Hicks CW၊ ပန်ဒါ MM၊ Itin I၊ ဖာနန်ဒက်ဇနာရီ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာသုံးယောက်တွင်ဆေးဝါးများကြောင့်သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည့်ရောဂါများကိုကုသရန် Valproate ။ ပါကင်ဆန် Relat Disord ။ 2011; 17: 379-81 ။ Doi: 10.1016 / j.parkreldis.2011.03.003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အာရုံကြောဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူး၊ အန္တရာယ်နှင့်စွဲလမ်းစေသောဆေးဝါးများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ယန္တရားများ၏ Schultz ဒဗလျူ။ Neuron ။ 51; 2011: 69-603 ။ Doi: 17 / j.neuron.10.1016 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
52 ဖရန့် MJ ။ မုန်လာဥသို့မဟုတ်တုတ်အားဖြင့်: Parkinson အတွက်သိမြင်အားဖြည့်သင်ယူမှု။ သိပ္ပံ 2004; 306: 1940-3 ။ Doi: 10.1126 / science.1102941 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
53. Balodis IM, Kober H၊ Worhunsky PD, White MA, Stevens MC, Pearlson GD, et al ။ အရက်အလွန်အကျွံစားသောရောဂါရှိသူနှင့်မပါဘဲအဝလွန်သူများအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုချခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 73: 877-86 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2013.01.014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
54. Balodis IM, Kober H၊ Worhunsky PD, Stevens MC, Pearlson GD, Potenza MN ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း frontostriatal လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 71: 749-57 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.01.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
55. ဗန် Eimeren T, Ballanger B, Pellecchia, G, Miyasaki JM, Lang AE, Strafella AP ။ Dopamine agonists သည် Orbitofrontal cortex ၏တန်ဖိုးအားထိခိုက်လွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 2758-66 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.124 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
56. Dong G, Huang J, Du X. ဆုလာဘ်ခံစားခွင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲသူများအတွက်အရှုံးမခံနိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း - ခန့်မှန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2011; 45: 1525-9 ။ Doi: 10.1016 / j.jpsychires.2011.06.017 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားလူနာအတွက် 57. Cavedini P ကို, Riboldi, G, Keller R ကို, D'Annucci တစ် ဦး က, Bellodi အယ်လ် Frontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 51: 334-41 ။ Doi: 10.1016 / S0006-3223 (01) 01227-6 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
58. Goudriaan AE၊ Oosterlaan J, de Beurs E, van den Brink W. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း။ လောင်းကစားဝိုင်းတွင်လောင်းကစားသမားများ၊ အရက်မှီခိုသူများ၊ Tourette syndrome ရောဂါရှိသူများနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Cogn ဦး နှောက် Res ။ 2005; 23: 137-51 ။ Doi: 10.1016 / j.cogbrainres.2005.01.017 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
59. Danner UN, Ouwehand C၊ van Haastert NL, Hornsveld H, de Ridder DTD အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အလေးချိန်ရှိအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအစာစားခြင်းရောဂါရှိသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း။ Eur: Disord Rev. 2012; 20: e56-62 စားပါ။ Doi: 10.1002 / erv.1098 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
dopaminergic neurotransmission နှင့် Iowa Gambling Task ၏စွမ်းဆောင်ရည်တို့အကြားပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုသည်ရောဂါကစားသမားများနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများတွင် 60. Linnet J, Møller A, Peterson E, Gjedde A, Doudet D. Scand J ကို Psychol ။ 2011; 52: 28-34 ။ Doi: 10.1111 / j.1467-9450.2010.00837.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၆၁ Power Y၊ Goodyear B၊ Crockford D. Neural ဆက်စပ်မှုသည် Iowa Gambling Task အတွင်းတွင်ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန် ဦး စားပေးရွေးချယ်သည် - fMRI လေ့လာမှု။ J ကို Gambl လုံး။ 61; 2012: 28-623 ။ Doi: 36 / s10.1007-10899-011-9278 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 62. Politis M, Loane C, Wu K, O'Sullivan SS, Woodhead Z, Kiferle L ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် hypersexuality ရှိအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအပေါ်အာရုံကြောတုန့်ပြန်မှု။ ဦး နှောက်။ 2013; 136: 400-11 ။ Doi: 10.1093 / ဦး နှောက် / aws326 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
63 Wang GJ, Geliebter A, Volkow ND, Telang FW, Logan J, Jayne MC ။ မူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါအတွက်အစားအစာကိုလှုံ့ဆော်နေစဉ်အတွင်း striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာသည်။ အဝလွန်ခြင်း။ 2011 ခုနှစ်; 19: 1601-8 ။ Doi: 10.1038 / oby.2011.27 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
64. Goudriaan AE, De Ruiter MB, Van Den Brink W, Oosterlaan J, Veltman DJ ။ cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ - fMRI လေ့လာမှု။ စွဲစွဲ Biol ။ 2010; 15: 491-503 ။ Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2010.00242.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဂါဗေဒကစားသမားများတွင် 65. Crockford DN, Goodyear B, Edwards က J, Quickfall J, el-Guebaly N. Cue-induced ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 787-95 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.04.037 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
66. Sun Y, Ying H၊ Seetohul RM, Xuemei W, Ya Z, Qian L ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲသူများ (အထီးမြီးကောင်ပေါက်) Behav Brain Res တွင် cue ရုပ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် crave အကြောင်း ဦး နှောက် fMRI လေ့လာမှု။ 2012; 233: 563-76 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2012.05.005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
67. Choi JS, Shin YC, Jung WH, Jang JH, Kang DH, Choi CH ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲ။ PLOS ONE ။ 2012; 7: e45938 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0045938 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
68. Holt DD, Green L, Myerson J. သည်စိတ်မ ၀ င်စားသောစျေးလျှော့ခြင်းကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းမဟုတ်သောကောလိပ်ကျောင်းသားများထံမှယာယီနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ခြင်းမှသက်သေသာဓကများ။ Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 2003; 64: 355-67 ။ Doi: 10.1016 / S0376-6357 (03) 00141-4 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
69. Madden GJ, Petry NM, Johnson PS ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားကိုက်ညီထိန်းချုပ်မှုထက်လျော့နည်းမတ်စောက်သောဖြစ်နိုင်ခြေဆုလာဘ်လျှော့။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2009; 17: 283-90 ။ Doi: 10.1037 / a0016806 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
70. Voon V, Gao J, Brezing C, Symmonds M, Ekanayake V, Fernandez H စသည်တို့နှင့်တူညီကြသည်။ Dopamine agonists များနှင့်အန္တရာယ် - ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်နေရာ၌စိတ်မ ၀ င်စားသောထိန်းချုပ်မှုပြordersနာများ။ ဦး နှောက်။ 2011; 134: 1438-46 ။ Doi: 10.1093 / ဦး နှောက် / awr080 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
71. Miedl SF, Peters J, Büchel C. နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ခြင်းဖြင့်ဖော်ပြရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများတွင်အာရုံကြောဆုလာဘ်ကိုယ်စားပြု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 69: 177-86 ။ Doi: 10.1001 / archgenpsychiatry.2011.1552 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
72. Brand M, Kalbe E, Labudda K, Fujiwara E, Kessler J, Markowitsch HJ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချချို့ယွင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2005; 133: 91-9 ။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2004.10.003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
73. Svaldi J, Brand M, Tuschen-Caffier ခ။ အရက်အလွန်အကျွံစားသောရောဂါရှိသည့်အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းချို့ယွင်းခြင်း။ အစာစားချင်စိတ်။ 2010; 54: 84-92 ။ Doi: 10.1016 / j.appet.2009.09.010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
74. Housden CR, O'Sullivan SS, Joyce EM, Lees AJ, Roiser JP ။ နဂိုအတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလေ့လာမှုဖြစ်သော်လည်းပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောရောင်စဉ်အပြုအမူများဖြင့်နှောင့်နှေးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 2155-64 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.84 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
75. Alessi S, Petry N. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုသည်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်အလိုလိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 2003; 64: 345-54 ။ Doi: 10.1016 / S0376-6357 (03) 00150-5 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
76. MacKillop J, Amlung MT, LR အနည်းငယ်၊ Ray LA, Sweet LH, Munafò MR ။ နှောင့်နှေးဆုလာဘ်လျှော့ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ: meta-analysis သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2011; ၂၁၆း၃၀၅-၂၁ ။ Doi: 216 / s305-21-10.1007-00213 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
77. Djamshidian A, Jha A, O'Sullivan SS, Silveira-Moriyama L, Jacobson C, Brown P, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောနှင့်စိတ်မရှည်နိုင်သည့်လူနာများအတွက်အန္တရာယ်နှင့်လေ့လာခြင်း။ Mov Disord ။ 2010; 25: 2203-10 ။ Doi: 10.1002 / mds.23247 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
78. Voon V, Sohr M, Lang AE, Potenza MN, Siderowf အေဒီ၊ Whetteckey J, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders: multicenter case-control လေ့လာမှု။ Ann Neurol 2011; 69: 986-96 ။ Doi: 10.1002 / ana.22356 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
79. Peters J, Büchel C. ယာယီဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနားလည်မှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2011; 15: 227-39 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2011.03.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
80 ။ Aron AR ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တားစီး၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2007; 13: 214-28 ။ Doi: 10.1177 / 1073858407299288 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
81. Verdejo-Garcia A၊ Lawrence AJ, Clark L. Impulsivity သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသား - အန္တရာယ်မြင့်မားသောသုတေသန၊ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2008; 32: 777-810 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2007.11.003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 82. Voon V ကို, Reynolds က B, Brezing ကို C, Gallea ကို C, Skaljic M က, Ekanayake V ကို။ dopamine agonist-related Impulse Control အပြုအမူအတွက်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2009; 207: 645-59 ။ Doi: 10.1007 / s00213-009-1697-y ကို။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
83. Thomsen KR, Joensson M, Lou HC, Møller A, Gross J, Kringelbach ML, et al ။ အမူအကျင့်စွဲအတွက်ပြောင်းလဲ paralimbic အပြန်အလှန်။ Proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ ၂၀၁၃ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
84. Forbush KT, Shaw M, Graeber MA, Hovick L, Meyer VJ, Moser DJ စသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Neuropsychological ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ။ CNS Spectrums 2008; 13: 306-15 ။ [PubMed]
85. Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု fMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1990-4 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.160.11.1990 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
86. Lawrence AJ, Luty J, Bogdan NA, Sahakian BJ, Clark L. Impulse နှင့်အရက်မှီခိုမှုနှင့်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာများကိုတုန့်ပြန်ခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2009; 207: 163-72 ။ Doi: 10.1007 / s00213-009-1645-x ကို။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
87. Dong G, Lu Q, Zhou H, Zhao X. အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပြwithနာရှိသူများအား Impulse inhibition: Go / NoGo လေ့လာမှုမှ electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ Neurosci လက်တ 2010; 485: 138-42 ။ Doi: 10.1016 / j.neulet.2010.09.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
88. Dong G, DeVito EE, Du X, Cui Z. 'အင်တာနက်စွဲရောဂါ' တွင်တားစီးထိန်းချုပ်ထားသောအားနည်းချက် - အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res Neuroimaging ။ 2012; 203: 153-8 ။ Doi: 10.1016 / j.pscychresns.2012.02.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
89. Djamshidian A, O'Sullivan SS, Lees A, Averbeck BB ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောနှင့်စိတ်မရှည်သောလူနာများအတွက်စမ်းသပ်မှုစွမ်းရည်။ Parkinsonism Relat Disord ။ 2011; 17: 212-4 ။ Doi: 10.1016 / j.parkreldis.2010.12.014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
90. De Ruiter MB, Oosterlaan J, Veltman DJ, van den Brink W, Goudriaan AE ။ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတာဝန်စဉ်ပြlersနာလောင်းကစားသမားများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်အတွက် dorsomedial prefrontal cortex အလားတူ hyporesponsiveness ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2012; 121: 81-9 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2011.08.010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 91. ဗန် Eimeren T က, Pellecchia, G, Cilia R ကို, Ballanger B, Steeves TDL, Houle S က။ တားဆီးပိတ်ပင်ထားသောကွန်ယက်များမူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်သွေးဆောင်မှုက PD တွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုခန့်မှန်းသည်။ အာရုံကြော။ 2010; 75: 1711-6 ။ Doi: 10.1212 / WNL.0b013e3181fc27fa ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
92 Cool R ကို, Robbins TW ။ သပ္ပါယ်စိတ်၏ဓာတုဗေဒ။ Philos Trans A သင်္ချာ Phys Eng သိပ္ပံ။ 2004; 362: 2871-88 ။ Doi: 10.1098 / rsta.2004.1468 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
93. Ersche KD, Roiser JP, Abbott S, Craig KJ, Müller U, Suckling J, et al ။ လှုံ့ဆော်မှီခိုအတွက်တုံ့ပြန်မှုဇွဲ striatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့်တစ် ဦး: D အားဖြင့်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်2 /3အဲဒီ receptor agonist ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 ခုနှစ်, 70: 754-62 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2011.06.033 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
94. Leeman RF, Potenza MN ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulsivity နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး အာရုံ။ psychopharmacology (Berl) 2012; 219: 469-90 ။ Doi: 10.1007 / s00213-011-2550-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
95. De Ruiter MB, Veltman DJ၊ Goudriaan AE, Oosterlaan J, Sjoerds Z, van den Brink W. တုံ့ပြန်မှု၏ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ယောက်ျား၏ပြgambနာလောင်းကစားသူများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများကိုအပြစ်ပေးရန် ventral prefrontal sensitivity ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 1027-38 ။ Doi: 10.1038 / npp.2008.175 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 96 Buckholtz JW, Treadway MT, Cowan RL, Woodward ND, Li R, Ansari MS ။ လူ့ Impulse အတွက် Dopaminergic ကွန်ယက်ကိုကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ 2010; 329: 532 ။ Doi: 10.1126 / science.1185778 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
97. Kreek MJ, Nielsen DA, Butelman ER, LaForge KS ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ၊ နတ်နေရာသစ်။ 2005; 8: 1450-7 ။ Doi: 10.1038 / nn1583 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
98. Schinka ဂျာ, Letsch EA, ခရော FC ။ DRD4 နှင့်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း - meta-analysis ၏ရလဒ်များ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 2002; 114: 643-8 ။ Doi: 10.1002 / ajmg.10649 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
99. Reid RC, Carpenter BN, Spackman M, Willes DL ။ hypersexual အပြုအမူအတွက်အကူအညီတောင်းလူနာများအတွက် Alexithymia, စိတ်ခံစားမှုမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ဖိစီးမှုအားနည်းချက်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2008; 34: 133-49 ။ Doi: 10.1080 / 00926230701636197 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
100. Bonnaire C, Bungener C, Varescon I. Alexithymia နှင့်လောင်းကစားခြင်း - လောင်းကစားသမားအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအချက်တစ်ခုလား။ J ကို Gambl လုံး။ 2013; 29: 83-96 ။ Doi: 10.1007 / s10899-012-9297-x ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
101. Carano A, De Berardis: D, Gambi F, Di Paolo C, Campanella: D, Pelusi L, et al ။ Alexithymia နှင့်မူးရူးအစာစားရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြင်ပလူနာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်။ Int J ကို Disord စားပါ။ 2006; 39: 332-40 ။ Doi: 10.1002 / eat.20238 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
102. Lombardo MV, Ashwin E, Auyeung B, Chakrabarti B, Lai MC, Taylor K ။ testosterone ဟော်မုန်း၏သန္ဓေသားပရိုဂရမ်းမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်လူသားများအတွက်အပြုအမူဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုလမ်းကြောင်းများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 72: 839-47 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.05.027 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 103. Voon V ကို, Pessiglione M က, Brezing ကို C, Gallea ကို C, ဖာနန်ဒက်ဇနာရီ, Dolan RJ ။ dopamine-mediated ဆုလာဘ်ဘက်လိုက်မှုအခြေခံယန္တရားများ compulsive အပြုအမူတွေအတွက်။ Neuron ။ 2010; 65: 135-42 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2009.12.027 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
104. Goto Y ကို, Otani က S, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ dopamine ထုတ်လွှတ်မှု၏ yin နှင့် yang - ရှုထောင့်သစ်တစ်ခု။ Neuropharmacology ။ 2007; 53: 583-7 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2007.07.007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Skype မှတစ်ဆင့် Skype CreditFree လိုအပ်သည်